NLD ဘာကြောင့်နိုင်သလဲ။ | dawnmanhon
ဒီမနက် ပို့စ်တွေ ဖတ်မိတယ်။ တစ်ချို့က (အထူးသဖြင့် လက်ရှိအစိုးရကို ထောက်ခံတဲ့သူတွေက) ပြောတယ်။ အနုပညာရှင်တွေ ကြောင့်နိုင်တာတဲ့။ အနုပညာရှင်တွေက ထွက်ပြောတော့ ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ပြည်သူတွေက ထွက်လာပြီး မဲပေးလို့ တောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်တာတဲ့။ ဒါက အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ မှန်တယ်။ အကုန်လုံး မမှန်ဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရင် (တစ်ခါက ရေးဖူးတဲ့) logical fallacy တစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်နိုင်သလဲလို့ ကိုယ့်ဘာကိုယ် စဉ်းစားကြည့်တယ်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လောကမှာ health system strengthening လုပ်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေဆွေးနေးရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒါ brain drain ပဲ။ healthcare workforce planning အောက်မှာပါတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပါ။ (အဲဒီ စာတမ်းနဲ့ ကျွန်တော် မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ယူခဲ့ပါတယ်။) brain drain ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲလို့ ရှင်းပြတဲ့နည်းတွေထဲမှာ အသုံးများတာက push and pull factors တွေပဲ။ မြန်မာလိုပြောရင်တွေ တိုင်းပြည်ထဲက တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ အခြင်းအရာတွေနဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံက ဆွဲဆောင်နေတဲ့ အရာတွေပါ။ အဲဒီ concept ကို အခြေခံပြီး NLD ဘာကြောင့်နိုင်တာလဲလို့ တွေးကြည့်တယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးက ရလာတဲ့ အသိတစ်ချို့နဲ့ လတ်တလော ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ရှုမြင်ကြည့်မိတယ် ဆိုပါစို့။
တွန်းအား (push factors) က များနေမလားလို့တောင် တွေးမိတယ်။ တွန်းအားဆိုတာ မဲထည့်တဲ့သူတွေကို USDP ကိုမထည့်ဘဲ တစ်ဖက်ပါတီဘက်ကို တွန်းထည့်လိုက်တဲ့အရာတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ လူအများစုဟာ NLD ကို ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင် ပါတီလို့ ထင်ပြီး မဲထည့်တာ မဟုတ်ဘူး။ လက်ရှိအာဏာရပါတီကို စိတ်ကုန်နေလို့ ထည့်တာ အများစုပါ။ စိတ်ကုန်ခဲ့တာ အခုမှ မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ရှည်လများ ခါးစည်းခံခဲ့ရတာဆိုတော့ ဒီခံစားချက်တွေက ရင်ထဲမှာ အခြေတည်နေတာ ကြာပြီ။ ဒါတွေက ရွေးကောက်ပွဲ ရောက်တော့ long-term push factors တွေဖြစ်လာတယ်။ (အဲဒါတွေကိုတော့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်လို့ မရေးတော့ဘူး။) ဒီကြားထဲ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကာလမှာ မလုပ်ထိုက်တာတွေ ထလုပ်မိတော့ ပိုဆိုးတယ်။ immediate push factors တွေဆိုပါစို့။ အဲဒါတွေကို ဥပမာ အနည်းငယ် ရေးပါမယ်။
(၁) မဲစာရင်း မမှန်တဲ့ကိစ္စ - မဲစာရင်းက သုံးခါလောက် ထုတ်တယ်။ တစ်ခါထုတ်တိုင်း တစ်ခါ ပိုကောင်းလာတယ် ဖြစ်ရမှာ။ ဒါပေမယ့် အဲလို မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ (ဘာကြောင့်ဆက်မှားနေသလဲ UEC က အသိဆုံးဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ရမ်းသမ်း တွေးလို့ပဲ ရတယ်။ ဒါတွေထားပါ) တမင်မှားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မလုပ်တတ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆက်ခါဆက်ခါ မှားတော့ လူတွေက တင်းလာတယ်။ တင်းလာပြီးတော့ မဲစာရင်းလေးတောင် မှန် အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေကို ငါတို့က ဘာကိစ္စ ဆက်အုပ်ချုပ်ခိုင်းရမှာတုန်းတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။
(၂) နိုင်ငံခြားက ကြိုတင်မဲတွေ အဆင်မပြေဘူး။ အုတ်အော် သောင်းနင်းပဲ။ အဲဒီတော့ ပြည်တွင်းက သူတွေကလည်း ကြိုတင်မဲတွေက စိတ်မချရဘူး။ ငါတို့ ထည့်မှ ဖြစ်မယ် ဖြစ်ကုန်ပြန်ရော။
(၃) မဲဆွယ်ကာလမှာ NLD ကို အဆင်မပြေဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ကိစ္စ။ ကချင်မနောကွင်းမှာ ပေးမလုပ်တာတို့၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်တို့ ကားကို တားထားတာတို့၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ပေးမလုပ်တာတို့ဟာ လူထုကို ဆွပေးသလို ဖြစ်တယ်။ မတရားတာကို ဘယ်သူမှ မကြိုက်ဘူး။ အတန်းပညာတတ်သည် ဖြစ်စေ၊ မတတ်သည်ဖြစ်စေ မတရားမှုကို လူတိုင်း ခံစားနားလည်တယ်။ (သွားလိမ်လို့ မရဘူး) အဲဒီတော့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ လုပ်ရင်တောင် မလာဖြစ်မယ့် သူတစ်ချို့က ဒင်းတို့ ဒီလောက်ယုတ်တာ။ ငါတို့တော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် သွားမယ်ဆိုပြီး သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့ဦးစေတီကို ပေါက်ချလာကြရော။ သွားမဆွထားရင် ဒီလောက် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။
(၄) ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီနဲ့ တစ်ချို့တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောတဲ့ တစ်ချို့မဲဆွယ်ချက်တွေဟာ (အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) လူထုအသံကို ရောင်ပြန်မဟပ်ဘူး။ လွဲနေတယ်။ ဖုန်းကိစ္စ ပြောတယ်။ သူတို့ဘက်က ပြောရင် ဖုန်းဈေးကျလာတာ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် လူထုဘက်က တွေးထားတာက ဒင်းတို့က နဂိုကတည်းက မဖြစ်သင့်တဲ့ ဈေးနဲ့ ရောင်းလာတယ်။ အခုမှ ဈေးကျတာ ငါတို့ ဘာလို့ ကျေးဇူးတင်ရမယ်လဲ။ သူတို့ဘက်က ပြောရင် မြစ်ဆုံကို ရပ်ပေးတာငါတို့။ ငါတို့ကို ကျေးဇူးတင်။ ဒါပေမယ့် လူထုတွေးထားတာက မြစ်ဆုံကို လုပ်တာလည်း မင်းတို့ပဲ၊ အစောကြီးကတည်းက မလုပ်သင့်တာကို လုပ်ခဲ့ပြီး ရပ်လိုက်တော့မှာ ငါတို့က ဘာကို ကျေးဇူးတင်ရမှာတုန်း ဖြစ်ကုန်ရော။ ဒီကြားထဲ အိုဘားမား ၂ ခါလာတော့ ၂ ခါ အနမ်းခံရတာပေါ့တို့ ဘာတို့လျှောက်ပြောတော့ လူတွေက ငတုံးမှ မဟုတ်တာ။ (What Susie says about Sally, saysalot more about Susie than it says about Sally. ဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိတယ်။) အဲဒီတော့ သွားပြီပေါ့။ အပြောခံရတဲ့သူကို အထင်မသေးဘဲ ပြောတဲ့သူကို အထင်သေးတာပေါ့။ အဲဒီလို ကိုယ်ပြောတာနဲ့ လူထုခံစားချက်နဲ့က သဟဇာတ မဖြစ်တော့ ကိုယ့်ကို ဘယ်ကြည်တော့မလဲ။ ကိုယ့်ဘက်ကို ဘယ်လာတော့မလဲ။ တစ်ဖက်ကို တွန်းထုတ်သလို ဖြစ်သွားတာပေါ့။
(၅) သတင်းစာနဲ့ အွန်လိုင်း အကောင့်တုတွေက ဖားချက်၊ ဖာချက်၊ အပုပ်ချချက်တွေဟာလည်းပဲ တွန်းအားတွေ ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ရေးတာတွေက လွန်ကျူးတော့၊ တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်တော့၊ လူတွေက ပြန်ရေးရင်း၊ ပြန်တုံ့ပြန်ရင်းနဲ့ ဘယ်ဘက်မှ မပါတဲ့သူတွေကတောင် NLD ဘက်သား ဖြစ်ကုန်ရော။
(၆) ကျွန်တော်သာ အစိုးရဘက်က လူသာဆိုရင် ဖမ်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင် ကပ်ရပ်မှာ ကျောင်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်မယ်။ လူထုဟာ အနိုင်ကျင့်တာကို မကြိုက်ဘူး။ ခံရတဲ့သူဘက်က နာပေးတတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို မုန်းခဲ့တဲ့ သူတွေကတောင် ဗိုလ်ခင်ညွန့် အကျယ်ချုပ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာတော့ ၀ိုင်းသနားကြတယ်။ (ကျွန်တော်လည်း အဲဒီတုန်းက ရုတ်တရက် သနားသလိုလို ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ရေကြည်အိုင်မှာ နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေ အကြောင်းတွေးလိုက်မှ အဲဒီသနားစိတ် လျော့သွားတယ်။) အဲဒီလိုပဲ။ ကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းတော့ ဒီမိုကရေစီပြောင်းချင်တယ်လို့ ပြောနေတဲ့ အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီတောင်းနေတဲ့သူတွေကို ဖမ်းတယ်တော့ဆိုပြီး ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တဲ့သူတွေက ဘယ်ကြိုက်မလဲ။ အဖမ်းခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သနားတာပေါ့။ ဒီကြားထဲ ကာချုပ်ကြီး ပုံတင်လို့ ဖေ့ဘုတ်သုံးစွဲသူတွေကို ထပ်ဖမ်းတော့ ၀ိုင်းပြီး အစိုးရကို စိတ်ဆိုးတာပေါ့။ စိတ်ဆိုးတော့ USDP ဘက်ကို ဘယ်လာတော့မလဲ။ တစ်ဖက်ကို ယိုင်ပြီပေါ့။
(၇) အောက်လမ်းနည်းနဲ့ မဲဆွယ်တဲ့ ကိစ္စ။ လူတွေက ဒါကို မကြိုက်ဘူး။ ဥပမာ အနှေးယာဉ် ဆရာတွေကိုပဲ ကြည့်။ USDP က မြို့နယ် တစ်ချို့မှာ ပိုက်ဆံပေးပြီး ဆိုက်ကားမှာ အလံထောင်ခိုင်းတယ်။ ဒါကို သိတော့ ကျန်တဲ့ အနှေးယာဉ်လုပ်သားတွေက ငါတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတော့ ထိလာပြီ။ ပိုက်ဆံမရတာ ကိစ္စမရှိဘူး။ ပြည်သူ့ တံတွေးခွက်မှာတော့ မှောက်လျက်အမျောမခံဘူး၊ နာမည် အပျက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုပြီး အုံလိုက်ကျင်းလိုက် NLD အလံတွေ နဲ့ ထွက်ချလာကြရော။ သူတို့နဲ့အတူ ဆိုင်ကယ်တွေ၊ ကားပိုင်ရှင်တွေလည်း ထွက်ချလာကြရော။ အဲမှာ ၀က်ဝက်ကွဲကုန်ရော။
(၁) အရေးအကြီးဆုံးကတော့ အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲ။ ပြည်သူက သူ့ကို ဘယ်လိုမြင်ထားမလဲလို့ တွေးကြည့်ရအောင်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး လို့ မြင်ထားတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးပိုင်း တောသူတောင်သားတွေဟာ NLD ကို မဲထည့်ဖို့ ဒီတစ်ချက်နဲ့တင် လုံလောက်တယ်။ လေထိပြီး အိပ်ရာထဲ လဲနေတဲ့ အသက် ၉၀ နားကပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အဖွား NLD ကို မဲထည့်တာလည်း ဒီအချက်က အဓိကပဲ။
အနိုင်ကျင့်ခံရသူလို့ မြင်တယ်။ နိုင်ငံရေးကို သိပ်မသိတဲ့ သူတွေတောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အကျယ်ချုပ်နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ အဲဒီတော့ သူ့ကို သနားစိတ်ရှိတယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို လူမျိုးကိုတောင် သနားခဲ့တဲ့လူမျိုးဟာ မိသားစုနဲ့ ဝေးကွာပြီး အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ အမေစုကိုဆိုရင် ဘယ်လောက် သနားမလဲ စဉ်းစားလို့ရတယ်။ သနားရင် ၀ိုင်းရံချင်တဲ့စိတ် ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးမှာရှိတယ်။
အမေစုကို အရည်အချင်းရှိသူလို့ မြင်ထားတယ်။ မြင်လည်း မြင်စရာကောင်းတယ်။ အမေစု ရထားတဲ့ဘွဲ့တွေ တစ်သီ တစ်သန်းကြီးရှိတယ်။ ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ဘယ်သူမှ မကြားဖူးတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေက မဟုတ်ဘူး။ အမေစုနိုင်ငံခြားသွားတော့ ဘယ်လိုကြိုဆို ဧည့်ခံကြလဲဆိုတာကိုလည်း လူထုက မြင်ထားတယ်။ အဲဒီတော့ အထင်ကြီးလေးစားကြတယ်။ အားကိုးကြတယ်။ အမေသာ ရွေးကောက်ခံရရင် တရုတ်ငယ်ကျွန်ဘ၀က လွတ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ လူရာသွင်းခံရမယ်ဆိုတာ သိတယ်။
လူထုက အမေစုကို ချစ်စရာကောင်းသူလို့ မြင်တယ်။ အမေစုဟာ လူတွေကို လူလို ဆက်ဆံတယ်။ လူပီသအောင် နေတယ်။ လူတွေကို စကားပြောရင် သူတို့ ရင်ထဲမှာ ဖြစ်နေတာတွေ ရောင်ပြန်ဟပ်အောင် ပြောနိုင်တယ်။ ကိုယ်ပြောချင်နေတာတွေကို သူက ကိုယ့်ကိုယ်စား ပြောပေးနေတယ်လို့ ထင်အောင် ပြောနိုင်တယ်။ သူများရေးထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်တာ မဟုတ်ဘူး။။ ဒါ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကာလမှာ တက်လာတဲ့ ပုံတွေကလည်း တစ်အားကောင်းတယ်။ ရန်ရန်ချမ်းတင်တဲ့ အနီပင်လယ်ထဲက အ၀ါရောင်လေးဝတ်ပြီး ပြည်သူနဲ့ တစ်သားတည်း ထိုင်နေတဲ့ ပုံတို့၊ ခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ ညစ်ပေနေတဲ့ လယ်သမကို ဖက်ထားတဲ့ ပုံတို့၊ ၀ိုင်းနမ်းကြတဲ့ပုံတို့၊ လမ်းဘေးက လှမ်းပေးတဲ့ ရေခဲမုန့်ကို စားနေတဲ့ ပုံတို့ (အဲဒီ ရေခဲမုန့်သည်ဟာ တစ်သက်လုံး အမေစု မှ အမေစု မဖြစ်ရင် ကြိုက်သလိုလာပြော)၊ ပြည်သူနဲ့ တူတူ သီချင်းဆိုနေတဲ့ ဗီဒီယိုတို့ဟာ ပြည်သူ့ရင်ဘတ်ထဲကို ရောက်တယ်။ (USDP မှာတော့ အဲလိုပုံတွေ ရှားတယ်)။ ပြီးတော့ အမေစုဟာ ကိုယ့်လူထုနဲ့ ပြောရင် ချိုချိုသာသာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ (ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ ၅၄ ခြံထဲမှာ အနုပညာရှင်တွေကို ပြောတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားဗီဒီယိုကို ကြည့်ပြီးပြီလား။ ဗေလုဝကိုတောင် စစ်သူကြီး မဟာဗေလုဝတဲ့။ နောက်နောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့ ဘာပကာသနမှ မပါဘူး။ တစ်အားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်)။ ဒါပေမယ့် အမေက နိုင်ငံခြားသွားရင် ခပ်တည်တည်၊ ခပ်မတ်မတ်ပဲ။ body language က အစ ပြောင်းသွားတယ်။ မာန်ရှိသွားတယ်။ ဟိုဖက်က လူတွေက အဲလို မဟုတ်ဘူး။ ပြောင်းပြန်။ ကိုယ်နိုင်ငံထဲ ဆိုရင် ငေါက်ချင်တယ်။ ဟောက်ချင်တယ်။ ခြိမ်းခြောက်ချင်တယ်။ ပါးတောင် ရိုက်ချင်တယ်။ အခမ်းအနားလုပ်ရင် သူများနဲ့ မတူတဲ့ ထိုင်ခုံ အကောင်းစားနဲ့မှ ထိုင်ချင်တယ်။။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာသာ အဲလိုကျယ်နေတာ။ နိုင်ငံခြားသွားရင်တော့ ကုပ်ကုပ်ကုပ်ကုပ်နဲ့။ အသံကလည်း မကျယ်တော့ဘူး။ ဘယ်သူမှ တခမ်းတနား မကြိုလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရထားနဲ့ သွားရတာတောင် public transport လေ့လာချင်လို့ လုပ်သေးတယ်။ (လေ့လာချင်ရင် ဆူးလေလာပြီး အင်းစိန်အထိ ၄၅ ဘတ်စ် စီးကြည့်ပေါ့။ သူများနိုင်ငံကျမှ လေ့လာစရာလိုသလား) ဒါတွေကို ငတုံးငအ မဟုတ်တဲ့ လူထုက မြင်တာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလို နှိုင်းယှဉ်မြင်တတ်တဲ့ သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အဖြူနဲ့ အမည်းဟာ ထင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ compare လုပ်တော့ contrast ဖြစ်နေတာပေါ့။ အဲဒီ အမည်းနဲ့ ယှဉ်တော့ လူတွေက အဖြူကို ချစ်တာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တေ်ာပြောတာတွေ ဘိုစကားလုံးတွေ များနေလို့ ရှေးရိုးစဉ်လာမြန်မာ့စကားနဲ့ ပြောရင် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါတွေနဲ့ ပြည့်စုံတယ်လို့ လူထုက ယူဆတော့ အားကိုးချစ်နဲ့ ချစ်ကြတာပေါ့။
(၂) အမေစု အပြင် တစ်ခြား ရွေးထားတဲ့ အမတ်တွေကလည်း လူထုက လက်ခံတဲ့သူတွေ အများစုဖြစ်တယ်။ မန္တလေးက ဆရာဦးသန်းဝင်းတို့၊ အမရပူရက ဆရာဦးဇော်မြင့်မောင်တို့လိုလူတွေကြည့်။ ရပ်ကွက်က မြို့က လက်ခံပြီးသား လူတွေ။ အငယ်ပိုင်းကဆိုရင်လည်း ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမဟုတ်ရင်တောင် ဘွဲ့ရ ပညာတတ်တွေ။ ဒေသနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်တဲ့သူတွေ။ ဒေသက ဘူဇွာလို့ မခံယူထားတဲ့ သူတွေ။
(၃) အနုပညာရှင်တွေရဲ့အား။ ဒီအားက တစ်အားကြီးတယ်။ ဒါကလည်း အမေ့အမြော်အမြင်တွေ ပါတယ်။ အမေဟာ အချုပ်ကလွတ်ပြီး သိပ်မကြာဘူး။ အနုပညာရှင်တွေကို ၅၄ မှာ ခေါ်တွေ့တယ်။ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင် စသဖြင့် စုံအောင်တွေ့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီတော့မှ ရိပ်မိတယ်။ အမေ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီလို့။ အဲဒီကတည်းက ကြိုတွေးထားတာ။ ဒီအနုပညာရှင်တွေဟာ အလကား ဆိုပေးတာ။ သူတို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရတယ်။
(၄) လူလတ်တန်းစား ပညာတတ်တွေရဲ့ ဆွဲအား။ သူတို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း ဒီအောင်ပွဲမှာ အရေးပါခဲ့တယ်။ သူတို့က တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ပါလာတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ သုံးပြီး လုပ်ကြတယ်။ ဘာကြောင့် ဘယ်ပါတီကို မဲထည့်သင့်တယ်လို့ ရေးတဲ့သူတွေက ရေးတယ်။ အဲဒါကို ၀ိုင်းရှယ်ကြတယ်။ NLD ကို မဲထည့်မယ်လို့ စတေးတပ်စ်တင်တဲ့သူက တင်တယ်။ ပရိုဖိုင် ချိန်းတဲ့သူကချိန်းတယ်။ အဲဒါတွေဟာ ကူးစက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ ripple effect တွေ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီလို တက်ကြွခဲ့တဲ့ သူတွေကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ဖေ့ဘုတ်ထဲမှာတွေ့နေတဲ့ အကောင့်တစ်ချို့ကို ကျွန်တော်တစ်အားလေးစားမိတယ်။ သူတို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက သက်သက်။ နိုင်ငံရေးသမားလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူတို့ယုံကြည်တဲ့ အမှန်တရားကို အခြေခံပြီး တိုင်းပြည်အတွက် တက်ကြွနေတဲ့ သူတွေ။ အကောင့်အစစ်နဲ့ မကြောက်မရွံ့ လှုံဆော်စည်းရုံးခဲ့သူတွေ။ သူတို့ရဲ့ စကားတွေဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခု တာသွားခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ထက် ငယ်တဲ့ သူတွေတောင်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ middle class ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်းပြောတာကို ယုံတဲ့ peer effect တွေလည်း ပါတယ်။
(၅) နောက် မဖြစ်မနေထည့်ပြောရမယ့် အချက်က နိုင်ငံခြားက ကြိုတင်မဲပေးတဲ့သူတွေ (အထူးသဖြင့်) စင်ကာပူက ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ။ သူတို့ ညအိပ်စောင့်ပြီး တန်းစီပြလိုက်တာ မြန်မာပြည်က တော်ရုံတန်ရုံလူက မနေနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့တောင် ဒီလောက်လုပ်တာ ငါတို့လည်း မဲမထည့်လို့ မဖြစ်ချေဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဝင်သွားတယ်။ ငိုတဲ့ပုံတို့၊ မူးလဲတဲ့ ဗီဒီယိုတို့ မြင်ရတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ လူပဲဗျာ။ ခံစားတတ်တာပေါ့။ အဲလိုမျိုးဖြစ်ရပ်တွေ တွေ့တော့ နှလုံးသားကို ကျင်စက်နဲ့ တို့ပြီး အနှိုးခံရသလို ဖြစ်တာပေါ့။ တစ်ချို့ဆို အဲဒီတော့မှ မဲစာရင်းသွားစစ်တဲ့သူကစစ် ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဒါကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလောကမှာ diffusion of ideas ဒါမှမဟုတ် diffusion of innovations လို့ ခေါ်တယ်။ (ဆပ်ပြာနဲ့ လက်ဆေးဖို့၊ ခြင်ထောင်ထောင်အိပ်ဖို့၊ ကွန်ဒုံးသုံးဖို့ စသဖြင့် အမူအကျင့်ပြောင်းလဲရေး စီမံကိန်းတွေမှာ ထည့်စဉ်းစားရတဲ့ သီအိုရီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။)
အဲဒီတော့ အချုပ်ပြောရရင် ဒီနိုင်ပွဲဟာ NLD က ဆွဲငင်အား ကောင်းလို့လည်း ပါသလို USDP က တွန်းထုတ်လိုက်လို့ တစ်ဖက်မှာ သွားရပ်ကြတာလည်း ပါတယ်။ မဲထည့်တဲ့သူတွေ မှာ အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ တစ်ချို့က ဘယ်ပါတီကိုထည့်မယ်ဆိုတာ သေချာပြီးသား။ တစ်ချို့က ဘယ်ပါတီလည်း ဆိုတာသိပ်မသေချာဘူး။ အဲလို လူတွေကို swing voters လို့ ခေါ်တယ်။ (swing ဆိုတာ ပန်းခြံထဲမှာ ကလေးတွေ စီးတဲ့ ဒန်း။ ဒန်းဟာ ဟိုဘက်ဒီဘက် ယိမ်းတယ်။) ဆွဲအားနဲ့ တွန်းအားတွေဟာ အဲလို swing voters တွေအပေါ်ကို သက်ရောက်မှုရှိတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲက ပါတီ အောင်နိုင်တာကို စားမြုံ့ပြန်ဖို့ထက်၊ ပေါက်ဖော်လုပ်ဖို့ထက် USDP နဲ့ တစ်ခြားပါတီတွေကို အနာဂတ်မှာ ကောင်းစေချင်လို့ ရေးတာဖြစ်တယ်။ (ဒီလိုရေးလို့ မင်းသစ္စာဖောက်ဆိုပြီး မဆဲကြနဲ့ဦးနော်။ ဆုံးအောင် ဖတ်ပေးပါဦး)။ ဒီမိုကရေစီဟာ တစ်ပါတီတည်းသွားလို့ ရတဲ့ စနစ် မဟုတ်ဘူး။ အဲလိုသွားတာဟာ အသွင်ကူးပြောင်းစမှာ (liberalization နဲ့ democratization ကာလတွေမှာ) လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ (consolidation ကာလရောက်ရင်) စိန်ခေါ်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အမေစု ရှိနေတုန်း ကိစ္စ မရှိပေမယ့် အမေစု မရှိတော့ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ (ကျွန်တော့် တစ်ယောက်တည်း အမြင်ကတော့ အမေစု ရှိနေသရွေ့ NLD ကို စိတ်မပူဘူး။ သဘောထား ကွဲလွဲလည်း ရပါတယ်။) အမေစု မရှိရင် NLD ကို ဘယ်သူထိန်းမလဲ။ NLD အချင်းချင်း ထိန်းရမှာ ဖြစ်သလို ပြည်သူတွေက ထိန်းရလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုပဲ တစ်ခြားပါတီတွေကလည်း ထိန်းရလိမ့်မယ်။ အဲလို ထိန်းဖို့ အရည်အသွေး ပြည့်ဝတဲ့ ပါတီတွေ ဖြစ်နေဖို့ လိုတယ်။ အခုရွေးကောက်ပွဲမှာ USDP နဲ့ အခြားပါတီတွေ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ချို့ဟာ အမှားတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေကို ပြင်ရလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်မှားခဲ့တာလဲလို့ ပြောရင် ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင် ၂ ချက်ကြောင့်ပဲ။ (သဘောထား ကွဲလွဲလည်း ရတယ်)
(၁) အရည်အချင်းနဲ့ တွေးမြင်နိုင်စွမ်း လိုအပ်နေသေးလို့။ အဲဒီအတွက် အရည်အချင်းဖြည့်ရမယ်။ အသက် ကြီးကြီး အဘတွေ ချည်းပဲ မဟုတ်ဘဲ သက်လက်ပိုင်း အရည်အချင်းရှိသူတွေနဲ့ အစားထိုးပြီး အရည်အသွေးမြှင့်ထားရမယ်။ အရည်အချင်းဆိုတဲ့ နေရာမှာ IQ တွင်မကဘဲ EQ ကောင်းတဲ့သူတွေလိုတယ်။ socially intelligent ဖြစ်တဲ့သူတွေ လိုတယ်။ လိုချင်တာက မဲ ပြောတဲ့စကားက ရိုက်ပေါက်ဆိုတဲ့ လူတွေကို ရှောင်ဖို့လိုတယ်။
(၂) ဒီအချက်က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တယ်။ စေတနာ မမှန်ခဲ့လို့။ စေတနာဟာ အတွေးကို ဖြစ်စေတယ်။ အတွေးကြောင့် လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ စေတနာဟာ ပင်မ ရေသောက်မြစ်။ အဲဒီလို စေတနာ မမှန်တာကို မှန်အောင်ပြင်ရမယ်။ စေတနာမမှန်တဲ့သူတွေကို စေတနာမှန်တဲ့သူတွေနဲ့ လဲရမယ်။ လူထုရဲ့ နှလုံးအိမ်ထဲရောက်အောင် သွားဖို့နည်းက တစ်လမ်းပဲ ရှိတယ်။ အဲဒါ လူထုကောင်းကျိုးကို တစ်ကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး တစ်ကယ်လုပ်ဖို့ပဲ။ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားက ပထမ၊ လူထုက ဒုတိယ ဆိုရင်တော့ အဲဒီနည်းဟာ အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ဒါဟာ ၂၀၁၅ သင်ခန်းစာပဲ။ အဲလိုလူတွေကို လူထုက ချဉ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီး ပြောင်းလဲရလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို လက်မခံဘဲ ငါတို့က ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက် တကယ်လုပ်လာတာကွလို့ တစ်ဖက်သက် ငြင်းနေတုန်းဆိုရင်တော့ ၂၀၂၀ ကျရင် ပိုင်ဆိုင်မှုလေး ချပြပါလို့ပဲ ပြောပါရစေ။ ဒါကို လက်ခံပြီး ပြုပြင်တော့မှသာ ရွေးကောက်ပွဲနီးတိုင်း ပိုက်ဆံပေး၊ ထမင်းကျွေးပြီး လူကြိုက်ခံချင်ယောင်ဆောင်ရတဲ့ ဘ၀က လွတ်မယ်။ လူထု တကယ်လက်ခံအောင် လုပ်ချင်ရင် လူထုတကယ် ချစ်အောင် နေရလိမ့်မယ်။ တကယ်ရိုးသားရလိမ့်မယ်။ You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. ဆိုတဲ့ စကားကို သတိရပါ။
စာတော်တော် ရှည်နေပြီမို့ နိဂျုံးခုတ်ပါတော့မယ်။ ဒီတစ်ပွဲ ဘယ်သူတွေ ဘာကြောင့်နိုင်၊ ဘာကြောင့်ရှုံးလို့ အတိုချုံးပြောပါဆိုရင် တစ်ခွန်းတည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ “ ကံ ” ပါပဲ။
(ပါတီအားလုံး အရည်အသွေး ပြည့်ဝပြီး စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောသော နိုင်ငံတော်ကို အမြန်ဆုံး တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ)
dawnmanhon: NLD ဘာကြောင့်နိုင်သလဲ။